Mamitaka ho lasa manam-pahaizana WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Fetsy 10 ho lasa manam-pahaizana WhatsApp
Villamandos | | Finday, WhatsApp
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo miaraka amin'ny mpampiasa be indrindra eran'izao tontolo izao ary tsy isalasalana fa ny malaza indrindra amin'ireo mpampiasa finday rehetra. Ny ankabeazanareo, azoko antoka fa efa hainao ny mampiasa azy io ho toy ny tena manam-pahaizana, fa raha sanatria mbola tsy nahatratra izany ambaratonga izany ianao dia anio dia hanolotra anao izahay Fetsy 10 ho anao mba ho tena guru WhatsApp, ary araraoty ihany koa ny fotoana betsaka indrindra ampiasanao ity fampiharana malaza ity.
Araka ny nolazaiko foana, makà pensilihazo sy taratasy, na mitadiava fomba hafa handraisana naoty satria anio ianao dia mety hianatra zavatra betsaka amin'ity lahatsoratra ity hamoahana ny WhatsApp, mihoatra ny efa nataonao, ary ho tena manam-pahaizana. Aza adino koa ny mampiasa ny fitaovanao finday satria azoko antoka fa maro amin'ireo tetika ampianarinay anao eto ambany no tianao hanandramana azy ireo avy hatrany.
1 Mariho fa mbola tsy novakiana
2 Amboary ny WhatsApp mba tsy hisintona sary na horonantsary ho azy izy io
3 Manampia mpandrindra mihoatra ny iray amin'ny vondrona iray
4 Tatero ho toy ny spam
5 Jereo hoe iza no namaky ny hafatro tao anaty vondrona
6 Esory ny maso indroa manga
7 Alaharo ho azy ny hafatra
8 Avereno ny resaka WhatsApp
9 Mampiaraha isa hafa noho ny karatra SIM anao
10 Afeno ny fotoana nifandraisanao farany
Mariho fa mbola tsy novakiana
Na eo aza ny safidy an'ny ny fanamarihana ny resaka tsy voavaky dia misy hatramin'ny kinova izay navoaka tamin'ny Jolay 2015, mpampiasa maro no mbola tsy mahalala an'ity safidy ity na ny fomba fampiharana azy. Misaotra an'izay, ny mpampiasa rehetra dia ho afaka manisy marika ny hafatra na maromaro ho mbola tsy voavaky, na dia efa namaky azy io aza.
Mba hahafahana manisy marika ny resaka rehetra tsy voavaky, dia ampy ho anao ny manindry tsy tapaka ny resaka ary na dia tsy hanafoana ny maso manga an'ny mpampiasa hafa aza izy io, dia hametraka boribory maitso kely amin'ilay resaka hampahatsiahy antsika fa mbola tsy namaky azy io isika.
Amboary ny WhatsApp mba tsy hisintona sary na horonantsary ho azy izy io
Ny ankamaroan'ny mpampiasa amin'ny faran'ny volana dia tsy ara-drariny amin'ny taham-data ataontsika, noho izany ilaina ny manamboatra rindranasa toa ny WhatsApp na Facebook mba tsy hisintomana na hilalao votoaty ho azy ireo raha tsy mifandray amin'ny tambajotra WiFi.
Raha tianao ny WhatsApp tsy misintona sary na horonantsary ho azy fa misy fifandraisana hafa mandefa anay, mila manaraka ireo dingana tsotra asehonay anao etsy ambany fotsiny ianao:
Sokafy ny WhatsApp ary kitiho ny bokotra menio ho hitanao eo amin'ny zoro ambony ambony.
Midira amin'ny Safidy safidy ary avy eo mifidiana Fikirana Chat
Amin'ireo safidy rehetra miseho dia ilay mahaliana antsika no milaza Fampidinana automatique ny haino aman-jery.
Safidio ny safidy mety indrindra aminao amin'ireo roa miseho.
Misaotra an'ity hetsika tsotra ity, tsy misy atiny nalefa tany aminay halefa ho azy, raha tsy mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi isika, ka hialana amin'ny fihinanana ny megabytes ny taham-data.
Manampia mpandrindra mihoatra ny iray amin'ny vondrona iray
Ny vondrona WhatsApp dia mety ho olona vitsy, fa ny sasany kosa mpikambana am-polony, ka tsy afaka hitarika azy ireo indraindray na hanaja azy ireo milamina. Ho an'ity dia mety ho tena mahaliana ampio mpandrindra mihoatra ny iray amin'ny vondrona iray, zavatra mety hahaliana tokoa.
Raha te hanana mpandrindra mihoatra ny iray amin'ny vondrona iray dia ho ampy amin'ny fidiran'ny mpandrindra an'io vondrona io ny fivarotana fampahalalana momba ny vondrona ary tsindrio ilay mpampiasa izay te ho tonga mpandrindra. Anisan'ireo safidy hiseho tsy maintsy safidintsika ny "Manaova mpitantana vondrona".
Tatero ho toy ny spam
Manana laza i WhatsApp fa tsy tena fampiharana azo antoka, ohatra, raha ampitahaintsika amin'ny Telegram, fa kosa manome antsika sasany safidy hitazomana antsika ho voaro amin'ireo mpampiasa hafa Mandefa hafatra junk fotsiny izy ireo nefa tsy fantany akory.
Izay mahazo hafatra avy amin'ny nomeraon-telefaona iray izay tsy notehiriziny tao amin'ny bokin'ny adiresy ary tsy fantany, dia afaka mitatitra izany hatrany ho an'ny spam hanakanana azy ary hitatitra azy ho spam.
Mazava ho azy, tandremo izay lazainao fa spam satria ilay mpampiasa tsy fantatrao tamin'ny voalohany dia mety hiafara amin'ny fahalalanao azy raha vao tadidinao.
Jereo hoe iza no namaky ny hafatro tao anaty vondrona
Raha nanoratra hafatra tamina vondrona ianao ary mandalo minitra nefa tsy misy mamaly, dia zavatra roa no tena antony. Ny voalohany dia ny hoe mandalo anao ny tsirairay na be atao izy na satria mbola tsy novakiana ny hafatra. Ity farany ity dia azo hamarinina amin'ny vondrona rehetra amin'ny fomba tena tsotra ary mazava ho azy fa hazavainay etsy ambany.
Raha tsindrio tsy tapaka ny hafatrao, dia hisokatra ny vatasarihana misy safidy eo an-tampony izay ahitanao a mariky ny fampahalalana. Tsindrio io kisary kely io ho fantatrao hoe iza amin'ireo mpikambana ao amin'ity vondrona ity no namaky ny hafatrao. Mazava ho azy, tadidio fa mety hoe efa namaky azy izy, fa tsy nianatra na inona na inona mihitsy, zavatra izay matetika mitranga amin'ny fomba mahazatra.
Esory ny maso indroa manga
Fotoana vitsy lasa izay WhatsApp dia niditra ho toy ny zava-baovao fizahana manga roa heny izay ahafahan'ny mpampiasa mahalala raha nisy iray namaky hafatra. Na dia tsy zava-baovao mahaliana sy mahasoa fotsiny aza ho an'ny maro izany, maro ny hafa mahita azy io ho fidirana an-tsokosoko amin'ny fiainana manokana izay tsikerain'izy ireo amin-katezerana.
Ho an'ireo mpampiasa rehetra mitsikera ity fizahana manga roa heny ity, nametraka vahaolana ny WhatsApp, misaotra izay azon'ny rehetra manaparitaka io safidy fanamafisana io.
Ny famonoana azy dia tsotra ary mila mankany amin'ny Settings, Account ary amin'ny farany hiditra ny menio Privacy. Ankehitriny isika dia tsy maintsy mamono ny serivisy, manala ny fanamarinana avy amin'ny safidy "Vakio ny fanamafisana".
Alaharo ho azy ny hafatra
WhatsApp dia mamela antsika hanoratra hafatra amin'ny fotoana tena izy, saingy indrisy fa tsy mamela antsika handefa hafatra voalahatra izay mety hahasoa tokoa, ohatra, miarahaba ny tsingerintaona nahaterahana na mampatsiahy namana na havana amin'ny zavatra samihafa.
Saingy noho ny fampiharana Seebye scheduler Afaka mandahatra mora foana izay hafatra halefa amin'ny daty sy ora tadiavintsika isika ary amin'ny mpandray izay fidintsika. Ity rindranasa ity dia tena hampiasaina ary azo alaina amina fitaovana misy rafitra fiasa Android amin'ny alàlan'ny fivarotana fampiharana Google ofisialy na Google Play mitovy.
Fiorenana Seebye scheduler
Avereno ny resaka WhatsApp
Ny resaka WhatsApp sasany dia mety misy lanjany manokana ho anao ary na dia mandritra ny andro vitsivitsy aza mety hanao backup, izay hazavainay ny fomba fanaovana ao Ity lahatsoratra ity, hanolotra vahaolana iray hafa izay efa nampiasaintsika maro hatramin'ny ela isika mba hahafahantsika mamerina ny resadresaka nifanaovanay tamin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo. Azo atao izany raha ovaina ohatra ny smartphone iray mankany amin'ny iray hafa.
Raha tianao izany sitrana ny resaka WhatsApp araho ireto dingana tsotra ireto;
Manaova backup amin'ny resaka terminal taloha. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ataonao amin'ny Settings, Chat Settings ary safidio izao ny safidinao Save save.
Ampifandraiso amin'ny solosainao ny fitaovanao ary tadiavo ny Fantsona WhatsApp / Databases. Ho hitantsika eo ilay fisie izay manomboka amin'ny "msgstore". Tehirizo ao amin'ny solo-sainanao ny fampirimana rehetra.
Mametraha WhatsApp amin'ny findainao finday vaovao, fa aza sokafana ny fampiharana na amin'ny toe-javatra ahoana na miasa tsy misy dikany ny asa rehetra nataontsika.
Avereno ampifandraiso amin'ny solosainao ny fitaovana findainao ary adikao ao anatiny ilay fampirimana Databases izay nalainay teo aloha tamin'ny solosaina.
Rehefa manomboka ny fampiharana WhatsApp ianao dia hanana ny resaka feno rehetra izay natombonao tao amin'ny fantsona taloha.
Mampiaraha isa hafa noho ny karatra SIM anao
Raha tianao izany mampiasa isa hafa amin'ny WhatsApp noho ny karatra SIM izany dia ao anatin'ny fitaovana, izay mety tena ilaina amin'ny tranga sasany, mila manaraka fotsiny ireo dingana tsotra ireo ianao;
Makà fitaovana finday hafa hampidirana ny karatra SIM amin'ny isa tianao hampiasaina.
Esory ny WhatsApp amin'ny terminal fa mila manana isa hafa ianao ilay ampiasainao matetika amin'ny WhatsApp.
Apetraho indray ilay rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo hangataka ny nomeraon'ny fanamafisana.
Ampidiro ny isa miaraka amin'ny telefaona hafa navadika ary miaraka amin'ny SIM ao anatiny.
Miandrasa ny SMS miaraka amin'ny kaody fanamafisana hahatratra ny laharana taloha amin'ny terminal hafa.
Ampidiro ny laharana fanamafisana amin'ny terminal misy ny nomeraon-telefaona vaovao.
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony efa manana WhatsApp misy isa hafa noho ny SIM-nao.
Afeno ny fotoana nifandraisanao farany
Raha tsy tianao hisy hifehy anao ary hahafantatra ny ora nanaovanao farany ny WhatsApp, ny fomba mora indrindra anaovana azy manafina ny fotoana nifandraisanao farany. Mba hanaovana izany dia tsy mila mankany amin'ny Fikirakira ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo fotsiny isika, miditra amin'ny safidin'ny kaonty ary misafidy ny fiainana manokana.
Amin'ity menio ity dia azontsika afenina ny fotoana anaovana fifandraisana farany, ary koa ny toerana misy antsika na koa ny sarin'ny mombamomba antsika amin'ny fomba haingana sy ambonin'izany rehetra izany.
Vonona ho tena manam-pahaizana WhatsApp marina noho ireo lahatsoratra 10 mahaliana ireo?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Fetsy 10 ho lasa manam-pahaizana WhatsApp
Indrisy dia hoy izy:
Tsara fa misaotra
Mamaly an'i leider
NES (Nintendo Entertainment System) feno 30 taona
Behringer Xenyx Q802USB, mixer mety ho an'ny podcasting